यस्ता १० खतरा साहसिक खेलका लागि विश्वमै चर्चित छ नेपाल ! [भिडियो] - Bigul News
यस्ता १० खतरा साहसिक खेलका लागि विश्वमै चर्चित छ नेपाल ! [भिडियो]
असार २७, २०७७ PP
काठमाडौँ – नेपाल, एड्भेन्चर नै एड्भेन्चरले भरिएको देश । नेपालमा धेरै यस्ता खेलहरु छन्, जुन एड्भेन्चरले भरिएका छन्। सँग-सँगै हाम्रो प्रकृतिसँग पनि जोडिएर रहेका छन् । आज हामी यस्तै १० वटा नेपालमा हुने एड्भेन्चर स्पोर्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौँ। आशा छ, तपाईंहरुलाई यो भिडियो मन पर्ने छ । यसलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला ।
नेपालको प्रकृतीले सुनमा सुगन्ध भरेको बन्जी जम्पिङ एक्दमै चर्चित छ। नेपालको सबै भन्दा चर्चित बन्जी जम्प ‘स्पट’को रुपमा भोटे कोसी बन्जी जम्प छ। १६० मिटर माथिबाट गर्न सकिने उक्त बन्जी जम्प काठमाडौंबाट ३ घण्टाको दूरीमा छ । यो बन्जी जम्प गर्ने ठाउँ विश्वकै सेफेस्ट यानिकी सबै भन्दा सुरक्षित बन्जी जम्पमा गनिन्छ । त्यसको साथ-साथै पोखरामा अवस्थित नेपालको टावर बन्जी जम्प पनि निकै चर्चित छ । पोखरा बजारबाट २० मिनटको दूरीमा रहेको उक्त बन्जीजम्पबाट देखिने अन्नपूर्ण र फिसटेल हिमालको दृश्यले बन्जी जम्पको अनुभवलाई थप रोमान्चक बनाउँछ।
खोला नाला र ताल तलैयाले भरिपूर्ण नेपाल कायाकिङ्गको लागि एकदमै राम्रो गन्तव्य मानिन्छ । प्लास्टिकबाट बनेको कायाक नेपालको हरियाली सँगै बगेको खोलामा चलाउँदा एक्दमै आनन्द महशुस हुन्छ । कायाकिङको लागि ३ देखी ४ दिन सम्मको प्रशिक्षण लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कायाकिङको मज्जा सेती, त्रिशुली, भोटे कोशी, मर्स्याङ्दी, कर्णाली र अरु थुप्रै नदीमा लिन सकिन्छ।
अन्य जानकारी भिडियोमा –
प्रकाशित : शनिबार, असार २७, २०७७१७:३४
नेपालका यी १० उत्पादन विश्वमै चर्चित छन् ! [भिडियो सहित]